Buula xaaji - Wikipedia
Buulo Xaaji waa degmo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee waddanka Soomaaliya.
Buula Xaaji waxay ku taallaa Gobolka Jubbada Hoose waxaana ay 80 Kiilomitir dhanka galbeed kaga beegantahay magaalada Kismaayo ee Caasimad gobolka Jubbada Hoose ee waddanka Soomaaliya. degmadan waxay marin ahaan ku taalla meel istaraatiiji ah waxaana hoos yimaada tobaneeyo tuulo oo usoo ganacsi iyo shaqo taga.
Degmadan Buula xaaji waxa haatan gacanta ku haya Ururka Islaamiyiinta Al-Shabaab muddo tobannaan sano ku siman, waxaana Buula Xaaji lagu xasuustaa heshiiskii ay 2010 kii ku gaareen ururka Al-Shabaab iyo urur diimeedkii la oran jiray Xisbul islaam, kaas oo ugu dambayntiin burburay.
Magaca Buula Xaaji waxa uu ku baxay (?) waxaana ay caan ku tahay wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nafleyda ah waxaana dadka deegaankaan ku nooli ay dhaqdaan xoolaha sida Geela Loda iyo Ariga.
Buula Xaaji waxa dadkeeda si wayn loogu yaqaanaa barashada diinta islaamka iyagoo juhdi badan ku bixiya soo saarista hadba jiilka soo koraya sidii ay u noqon lahaayeen kuwa dalka iyo dadka wax u tara waxaana degmada ku yaalla dugsiyo Qur'aan oo ubadka iyo dadka waawayn ba ay Qur'aanka ku bartaan iyo Iskuul ubadka lagu soo saaro.
Degmada Buula Xaaji waxa ku dhaqan beesha Doqondiide oo ka mid ah beelwaynta Geeljacel waxayna deegaan ku yihiin badanaa gobolada koonfurta soomaaliya, gaar ahaan gobolada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Baay, Bakool, Shabeellaha Dhexe , Shabeellaha Hoose , Hiiraan iyo Banaadir...
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Buula_xaaji&oldid=208153"
Magaalooyinka Gobolka Jubbada Hoose
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Jannaayo 2021, marka ee eheed 10:06.